चायालाई सखाप पार्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/चायालाई सखाप पार्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
काठमाडौँ । सरसफाइ पनि चायाँको कारक हो । सरसफाइमा ध्यान नदिने मानिसमा चायाँ पर्ने सम्भावना हुन्छ । कपाल कम नुहाउने बानीले पनि चायाँ पर्न सक्छ । शरीरमा हुने हर्मोन परिवर्तन, वंशाणुगत गुण, टाउकोमा विभिन्न रोग, अस्वस्थकर खानपान, कपालमा केमिकलको प्रयोगजस्ता कारणले पनि चायाँ पर्छ । त्यस्तै, सुक्खा वातावरणमा बस्दा पनि कपालमा चायाँ पर्ने समस्या हुन्छ । लामो समयदेखिको तनाव, थकान, चिन्ता, र टाउकोमा हुने एलर्जीका कारण पनि चायाँ पर्ने समस्या हुन्छ ।
प्रायः कपाल नकोर्ने, टाउको ननुहाउने, फुस्रो छाला भएका, चिसो मौसममा कोठा न्यानो पारेर बस्ने, बढी नुनिलो, गुलियो र मसालेदार खाना खाने तथा रक्सी सेवन गर्ने हरुमा चाया पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जाडो मौसममा टाउकोबाट टोपी नझिक्ने, कम नुहाउनेहरुलाई चायाले उस्तै खेदो खन्छ ।यस्तै, हृदयघात र मस्तिष्कघातबाट तंग्रिन लागेका बिरामी, जिंक तथा भिटामिनको कमी भएका, मानसिक तनाव भएका मानिसलाई पनि चायाँले सताउँछ ।
कागतीलाई २ टुक्रा बनाउनुहोस् र एकचोटिमा एउटा टुक्राले आफ्नो तालुमा १० मिनेटसम्म मसाज गर्नुहोस्। मसाज गरिसकेपछि स्याम्पूले टाउको पखाल्नुहोस्। यो विधि १ हप्तासम्म नियमित अपनाउनाले चायाँबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । आफ्नो कपाललाई चाहिने जति नरीवलको तेल अथवा तोरीको तेल लिनुहोस् र त्यसमा ४र५ थोपा कागतीको रस मिसाएर घोल्नुहोस्। त्यो मिश्रणले तालुमा मसाज गर्नुहोस्। यसले चायाँको उज् लेभललाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। कागतीलाई दिनभरी घाममा सुकाउनुहोस् र त्यसलाई नरीवलको तेलमा मिसाएर तालुको मसाज गर्नाले पनि चायाँबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
यदि तपाईँको कपाल चिल्लो छ ९यष्थि जबष्च० र चायाँ पनि चिल्लो छ भने कागती लगाउनु उचित हुँदैन। बरु त्यसको सट्टा दही लगाउनुहोस्। दहीले चायाँ परेको तालुमा १० मिनेटजति मसाज गर्नुहोस् र पछि स्याम्पूले पखाल्नुहोस्।
यदि तपाईँको कपालमा रङ्ग लगाउनुभएको छ र चायाँ परेको छ भने कागती र दही लगाउँदा कपालको रङ्ग उँड्न सक्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा अदुवाको जुसले तालुको मसाज गर्नुहोस्। १ हप्तासम्म नियमित अदुवाको जुसले तालुको मसाज गर्नाले चायाँलाई सखाप पार्न सकिन्छ।
जसरी अदुवाको जुसले रङ्ग लगाएको कपालबाट चायाँ हटाउँछ, त्यसरी नै सखरखण्डको जुस पनि रङ्ग लगाएको कपालको लागि फाइदाजनक हुन्छ। यसले उज् लेभललाई नियन्त्रण राख्नमा मद्दत गर्नुको साथै, कपालको रङ्गलाई समेत कुनै असर पुर्याउँदैन।
घिउकुमारीले पोलेको अनि काटेको घाउलाई निको पार्छ भन्ने त सायद सबैलाई थाहा नै छ होला। तर यो बहुउपयोगी आयुर्वेदिक जडिबुटीले कपालको चायाँ हटाउनमा समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमीका खेल्दछ। दैनिक १ हप्तासम्म घिउकुमारीको जेलले तालुको मसाज गर्नाले चायाँको थप उत्पादन हुन सक्दैन।
जीरालाई मसिनो गरी पिनेर मनतातो पानीसँग मिसाई लेदो बनाएर तालुमा लगाउँदा पनि चायाँबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। राति सुत्नेबेला जीराको लेदो तालुका लगाउनुहोस् र विहान उठेर त्यसलाई स्याम्पूले पखाल्नुहोस् ।